Spanish Canary Islands iri kugadzirira kuputika kwekuputika kwemakomo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Spain Kuputsa Nhau » Spanish Canary Islands iri kugadzirira kuputika kwekuputika kwemakomo
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
"Hatigone kuita fungidziro yenguva pfupi, asi zvese zvinoratidza kuti ichashanduka kuita kudengenyeka kwenyika kune hukuru hwakakura huchave hwakanyanya uye hunonzwikwa nevanhu," akadaro director weGN muCanary Islands, María José Blanco, akadaro.
Kudengenyeka kwenyika kwakazara makumi mana nemakumi mana nemaviri ekudengenyeka kwakawanikwa padyo negomo reTenegula pachitsuwa cheLa Palma.
Vakuru veCanary Islands vakaburitsa yero yambiro - yechipiri mune ina-nhanho system.
Spain's National Geographic Institute yakayambira kuti kudengenyeka kwenyika kwakanyanya kunotarisirwa mumazuva anotevera.
Vakuru vematunhu ehurumende kuSpanish Canary Islands vakapa yambiro yekuti kunogona kuitika kuputika kwemakomo, mushure mekunge National's Geographic Institute (Spain) yaSpain yaona 'kudengenyeka kwenyika' kwekudengenyeka kwenyika 4,222 padhuze negomo reTeneguía pachitsuwa che La Palma.
Teneguía gomo rinoputika pachitsuwa cheLa Palma.
The Canary Islands vakuru vakuru vakapa yambiro yenjere neChipiri - yechipiri mune ina-nhanho system, yambiro nezve kudengenyeka kwenyika kungangoitika.
Nhasi, kuongororwa kwakagadziridzwa kutaura kuti, nepo vakuru vacho vasingatendi kuti kuputika kuri kuda kuitika, mamiriro ezvinhu anogona kuchinja nekukurumidza.
IGN ayambirawo kuti “kudengenyeka kwenyika kwakanyanya” kunotarisirwa “mumazuva anouya.”
"Hatigone kuita fungidziro yenguva pfupi, asi zvese zvinoratidza kuti ichashanduka ikava kudengenyeka kwenyika kune hukuru hwakakura huchawedzera uye nekunzwa nevanhu," director we IGN muCanary Islands, María José Blanco, akadaro.
Kubva musi weChina, mamirioni gumi nemamirioni emamirimita akaiswa "jekiseni" mukati meCumbre Vieja National Park padyo negomo reTeneguía, sekureva kweCanary Islands Volcanology Institute, zvichikonzera pasi kusimuka ne11cm (388in) pakukwirira kwayo.
Volcano rakapedzisira kuputika muna 1971, richikonzera kukuvara kwezvivakwa nemahombekombe ari padyo, nekuuraya mubati wehove mumwe, kunyangwe nzvimbo dzine vanhu vazhinji nenzvimbo dzevashanyi dzakapoterera dzisina kukanganiswa. Mushure mekuputika kweakamboitika, chiitiko chekuvhunduka chakadzikama, kutangazve muna 2017, nemazuva achangopfuura achiona kuwedzera kwekudengenyeka.
Zvimwe zvikamu zve Canary Islands iri zvakare musha kumakomo anoputika, anosanganisira Tenerife's Teide, iyo isina kuputika kubvira 1909, uye Lanzarote's Timanfaya, yakapedzisira kuputika muzana ramakore rechi19.